Man United oo helaysa akhbaar xun oo ku aadan Antoine Griezman - Wargane News
Home Sports Man United oo helaysa akhbaar xun oo ku aadan Antoine Griezman
Jose Mourinho ayaa loo sheegay in Antoine Griezmann uusan ka soo tagi doonin Atletico Madrid xagaagan.
Manchester United ayaa bartilmaameedsanaysay inay u soo dhaqaaqdo dhaliyaha reer France, Jose ayaana masuuliyadda howshaas qoorta u suray madaxa fulinta kooxda ee Ed Woodward.
Griezmann ayaa la filayaa inuu ku koco ku dhawaad aduun dhan 85 milyan oo bound balse Atletico ayay ka go’an tahay inay sameyso wax kasta oo karaankeeda ah si ay u xafidato xiddigeeda.
Madaxwaynaha kooxda ka dhisan caasimadda Spain Enrique Cerezo ayaa sheegay in Griezmann uu kal ciyaareedka soo socda xiran doono maaliyadooda ee ka kooban gaduudka iyo caddaanka marka ay ku ciyaari doonaan garoonkooda cusub ee Wanda Metropolitano
“Griezmann wuu joogi doonaa,” Cerezo ayaa sidaa yiri mar uu u waramayay Marca.
“Ma ahan garoonka Calderon ee wuxuu joogi doonaa Wanda.”.
Warar hore ayaa soo jeediyay in weeraryahanka reer France uu heshiis shaqsi ahaaneed la gaaray kooxda ka dhisan Premier League, laakiin laacibka ayaa beeniyay warkaa isagoona sheegay inay waxba ka jirin isla markaana mustaqbalkiisa war laga soo saari doono marka uu wada hadalo la yeesho lataliyayaashiisa dhanka Isboortiga.